‘Las Patronas’: Manova Ny “Fiarandàlambin’ny Fahafatesana” Meksikana Ho Araka Ny Maha-Olona Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2015 15:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Français, русский, 日本語, Español
Ireo mpifindra monin'i Amerika Afovoany miandry hiondrana ao amin'ny fiarandàlamby mpitondra entana any Ixtepec, Meksika. Ilay fiarandàlamby antsoina hoe Ilay Biby no hitondra azy ireo any amin'ny sisintany mampisaraka an'i Etazonia sy Meksika. Sary kaonty Flickr-n'i Peter Haden nampiasàna ny Creative Commons.
Manavatsava an'i Meksika avy any atsimo ka hatrany avaratra ilay fiara antsoina hoe ” ny fiarandalambin'ny fahafatesana “. Mitondra ireo Amerikana avy ao Afovoany mpifindra monina izay manantena ny ho any Etazonia hitady ny ho avy tsaratsara kokoa ity fiarandalamby mpitatitra entana ity. Ireo olona niharan'ny fangalarana, ny fakàna an-keriny, ny fanolanana ary ny fampijaliana no matetika mandeha fiarandalamby. Miray hina amin'izy ireo ny Las Patronas.
Ny Las Patronas dia fiarahan'i Norma Romero sy vondrona iray misy irao vehivavy avy amin'ny fianakaviany izay mahandro tsaramaso sy vary iray vilany be ary mizara izany ao anaty kitapo miaraka aminà tapa-mofo sy rano izay natao ho an'ireo mpifindra monina ho any Etazonia rehefa mamakivaky an'i La Patrona ilay fiarandalamby. Mpifanolo-bodirindrina amin'i Acatlán de los Reyes, Veracruz any Meksika i La Patrona. Asongadina ao amin'ny hataka iray vao haingana sy tena goavana ao amin'ny Change.org ny asan'ilay vondrona.
Ezaka natao hampahafantarana ny asan'ilay vondrona izay efa niasa roapolo taona mahery ilay hataka, sao mba mety ho ry zareo no hahazo ny lokan'ny Princess of Asturias, ary tratrany ny tanjony.
Mpifaninana amin'ny lokan'ny Princess of Asturias ny Las Patronas
“Fiaraha-miasa ho fankasitrahana sy fampiroboroboana ireo soatoavina ara-tsiansa, ara-kolontsaina sy maha-olona izay isan'ny fananan'ny olona eran-tany” ny loka omen'ny Fikambanana Princess of Asturias. Isan'ny nahazo loka tamin'ity taona ity i Francis Ford Coppola sy ny Wikipedia.
I Romero, mpamorona ny Las Patronas no nahazo ny lokan'ny Mpiaro ny Zon'olombelona natolotry ny Vaomiera nasionalin'ny Zon'olombelona any Meksika tamin'ny 2013, ary fanekena ny asany amin'ny fampiroboroboana sy ny fiaroavana ny zon'ny mpifindra monina izany.
Tsy mahagaga raha antsoina hoe ” fiarandalambin'ny fahafatesana” ilay fiarandalamby.
Manoratra ny momba ‘Ilay Biby’ ao amin'ny ZonaJ i Julián Carmona :
Mario no anarany. Lazainy fa 28 taona izy ary avy any Goatemalà, vao nanomboka ny diany ho any Etazonia izy sy ny sipany antsoina hoe Elsa Marlen, 19 taona izay bevohoka kambana no tsy hita tao amin'ny kaominin'i Huixtla, fanjakan'i Chiapas i Elsa Marlen
Nitady azy nandritra ny herinandro maromaro izy, hoy izy, nitady azy tamin'izay làlana nalehany ary nitodi-doha nankany Goatemalà. Volana maromaro taty aoriana, fantany tamin'ny alàlan'ireo sary nalefan'ny iraky ny fireneny ho azy ny vatan'ny sipany. Noboriana ny tànany. Nalevina any amin'ny fasana iombonana izy.
Nanoratra lahatsoratra natokany ho an'ilay vondrona i José Luis Pinilla Martín ao amin'ny bilaoginy, izay nilazany fa nanana fahasahiana be ilay vondrona tamin'ny nanombohany ny fanampiany ireo mpifindra monina tsy manana taratasy mihetsika manerana an'i Meksika tamin'ny fotoana naha-heloka ny fanaovana izany.
Araka ny efa fantatr'izy ireo rahateo, dia sehatra itondràna ny sedra niainan'ny fikambanana sy ny vondrona rehetra mba ho fantatry ny olona ilay maripankasitrahana. Noho izany, ny fanovàna ny Las Patronas ho Printsesa – toy ny hoe ry zareo no “Cendrillons” – Ikala Lavenon'ny taonjato faha-21– dia manasongadina ny zava-misy marina amin'ireo vondrom-behivavy mitàntana sampan-draharaha iray voalamina tsara izay manintona ny saina ho amin'ny fiainana henjan'ireo mpifindra monina, na lahy na vavy, amin'ny làlana mamakivaky an'i Meksika (sy izay làlana rehetra mitovy amin'izany maneran-tany). Ary ho hitanareo fa tsy amin'ny fotoana lanin'izy ireny amin'ny diany ihany no fijaliana sy loza mihatra amin'izy ireo, fa hatrany amin'ny firenena niaingany ka hatrany amin'ny firenena ahatongavany ihany koa. Ambonin'izay, niova ho hetsiky ny tanàna iray manontolo – amin'ny ohatra notsongaina- ilay hetsika tokana natombok'i Rtoa Norma.
Araka ny filazan'ny tranonkala Sin Embargo, dia tsy mora ny làlana nahatongavana teo amin'ny filatsahan-ko fidiana :
Tsy maintsy fahefana mivantana avy any Madrid amin'ny alàlan'ny diplomaty avy any amin'ireo firenena tsirairay avy ny fanendrena ny nahazo loka, saingy tara tamin'ny fanaovana izany ny masoivoho Meksikana, na ny marimarina kokoa, tsy te-hanao izany izy mandra-panerin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Change azy amin'ny hetsika izay ahafahan'ny olom-pirenena manohana ireo mpifaninana amin'ny alàlan'ny sonia amin'ny aterineto.
Na dia ny Antenimieran-doholona sy ny Antenimieram-pirenena aza dia nanelanelana tamin'ny fampitandremana ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny. Sonia 7.500 no ilaina ; nefa sonia manodidina ny 50.000 no voaangona.
Tantaran'i Las Patronas bebe kokoa :
Ho lazain'ny Fikambanan'ny Princess of Asturias amin'ny faha-2 Septambra izay hahazo ny Lokan'ny Fiaraha-miaina Am-Pilaminana (Concord).